Imwe nzira yeLinux Enhancements kune Windows Software | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mutsva kune iyo GNU / Linux nyika uye iwe unobva papuratifomu yeWindows, mune ino chinyorwa uchawana gwara rakakura kusarudza software yakakodzera iwe yauri kutsvaga. Tichaongorora software yakanyanya kushandiswa muWindows uye kubva kune dzakasiyana niches kugutsa zvinenge zvese zvaunoda izvozvi zvauri mushandisi weLinux.
Paunogara pane GNU / Linux kugovera, iwe unogona kufunga kuti pane zvishoma software yeiyi system pane ye WindowsAsi dzimwe nguva kune dzimwe nzira dzakasiyana dzakasiyana zvekuti dzinogona kuvhiringidza uye kusarudza chaiyo inonetesa vatsva.
Ndosaka tichikuunzira gwaro rinoshanda. Ichakubatsira iwe kusarudza rakanakisa pasuru nenzira yakapusa. Iwe unongofanirwa kutsvaga iyo Windows chirongwa icho chaunoda iyo GNU / Linux imwe nzira kubva pane inotevera runyorwa uye verenga ndima inoenderana nechirongwa ichocho, kwaunowana nzira dzakakurumbira.
Kune akawanda zvirongwa zveWindows uye zvinonetsa kupfupisa iwo ese, kunyanya tichifunga kuti mushandisi wega wezvavanoda anoshandisa akasiyana marudzi esoftware uye kuti huwandu hwe dzimwe nzira izvo zviripo zveGNU / Linux zvakakura. Asi zvinonyanya kukosha ndezvi:
1 Hofisi otomatiki uye zvinyorwa
2 Dhirowa, mifananidzo uye retouching pikicha
2.1 Paint yeMS
2.2 Corel Dhirowa / Adobe Illustrator
2.4 Google Picasa / Microsoft Office Mufananidzo Manager
3 Torrent uye P2P kurodha pasi
3.1 bit torrent
4 Agenda uye tsamba
4.1 Microsoft Outlook
5 Instant mameseji uye taurirana
5.2 Microsoft Windows Live Mutumwa
6 Webhu mabhurawuza
7 Dhizaini uye Cad
7.1 Corel Motion Studio
7.2 Magix Vhidhiyo Deluxe / VirtualDub
7.4 Adobe Dreamweaver / Microsoft Frontpage
8 Multimedia (vhidhiyo, odhiyo uye vashanduri)
8.1 Mahara Audio Converter
8.2 FLV Vhidhiyo Shanduro / DVDvideosoft
8.4 Apple iTunes
8.5 Nullsoft Winamp
8.6 VLC / Windows Media Player
8.8 Zvibereko Zvakawanda
9 Kurekodha CD / DVD / BD uye disc mifananidzo
9.1 Pamberi Nero Kupisa ROM / CloneCD
9.2 Daemoni Zvishandiso
10 Faira kumanikidza / kudzvinyirira uye kupatsanura
10.1 WinRAR / WinZIP / IZARc / 7zip
11 Chengetedzo uye backup
11.1 Windows Defender
11.2 Antivirus (BitDefender, Eset NOD32, Kaspersky, ...)
11.3 Acronis Yechokwadi Mufananidzo / Symantec Norton Ghost / Mberi Nero BackitUp / Paragon Backup & Kudzoreredza
12 Sayenzi neTekinoroji
12.1 Autodesk AutoCAD Magetsi
12.2 TINA / ZVINODA / OrCAD / Garwe Technology
12.4 Celestia / Stellarium
13 Zvishandiso uye zvinoshandiswa
13.1 Symantec Norton Chikamu Part Magic / Partition Wizard
13.2 Jconverter / Super Unit Shanduri
13.4 Everest / AIDA64 / Siftsoft SANDRA
13.6 DOSBox / MAME
14.2 Arduino IDE / Arduino Block
15.1 Lonquendo / Chinyorwa-kune-Kutaura uye nevamwe
Hofisi otomatiki uye zvinyorwa
Kune akati wandei mahofisi masutu eGNU / Linux. Ivo vakanaka chose uye vakakwana uye kunyange vanosanganisira rutsigiro rweMicrosoft Office faira rekuwedzera, ndiko kuti, iwe unogona zvese kusevha uye kuvhura mafaera emuno kune Microsoft suite. Dzimwe nzira mbiri dzekuratidzira ndidzo LibreOffice uye OpenOffice, mapurojekiti ese ari maviri mahara. LibreOffice yakazvarwa se forogo kana kubva kuOpenOffice uye pamwe ndiyo yave iri kubudirira kwazvo munguva pfupi yadarika.
Adobe yakagadzira vhezheni yeAcrobat Reader yeGNU / Linux, asi kune dzimwe nzira dzinonakidza dzakavhurika. Iyo inonyanya kuzivikanwa ndeye Evince, muverengi wegwaro rePDF iro risingaremi, rakakwana uye harina chinhu chekugodora chirongwa cheAdobe. Uye zvakare, chimwe chezvinhu chandinokoshesa zvakanyanya pamusoro paEvince ndechekuti inochengetedza peji rawanga uchiverenga kuitira kuti paunorivhura zvakare rigoenda kuchikamu chawakagara. Dzimwe nzira ndeye Okular, Foxlt Reader, ...
Iko kune vakanaka vapepeti veGNU / Linux, kunyangwe iyo yakafuma PDF ichiri yakati siyanei. Asi unogona kushandisa PDF Mhariri kana zvakafanana, izvo zvaunogona kushandura mamwe marudzi emafaira muPDF uye wozvigadzirisa nekuwedzera zvinhu.
Iyo inozivikanwa Windows notepad yakapusa uye yakasarudzika, asi inogona kubatsira zvakanyanya pakunyora kodhi, manotsi, nezvimwe. Kana iwe uchitsvaga imwe nzira yeGNU / Linux, unogona kusarudza imwe yezvandinoda, gedit. Nano imwe imwe yakafanana uye yakapusa sarudzo, iwe unogona zvakare kuwana dzakaomarara dzakafanana neVi kana Emacs.
Dhirowa, mifananidzo uye retouching pikicha
Vakakurumbira Pinta Zvinotibatsira kudhirowa uye kutibuditsa mumatambudziko mazhinji nekuda kwekureruka kwayo. Kana iwe uchida kutsvaga yakafanana chirongwa cheGNU / Linux, unogona kuwana runyorwa rurefu. Asi ruzivo uye bvunzo dzandakaita, gara uchinditungamira kuti ndisarudze Pinta, kunyangwe paine vamwe vakaita seGNU Paint, ... Iyo interface iri nyore, yakafanana chaizvo neiyo yeMS Paint uye nematurusi akatonyanya kuzara kupfuura iwo weuyu.
Corel Dhirowa / Adobe Illustrator
Imwe yakanaka yemhando yepamusoro yekudhirowa uye kugadzirisa mifananidzo ndeye Inkcape. Iyo inogona zvakakwana kutsigira aya mapurogiramu.
Unogona kushandisa Gimpshop, chirongwa chemahara uye chakavhurika chinowirirana chaizvo neiyo Photoshop interface. Asi iyo yakanakisa uye inonyanya kukodzera sarudzo ndiyo inozivikanwa GNU GIMP. Maonerwo aro akatosiyana ne Photoshop, asi simba rayo, hunyanzvi, uye sarudzo dzemberi dzinozvikwidziridza pamusoro pechero chipi zvacho.
Google Picasa / Microsoft Office Mufananidzo Manager
Unogona kuisa zvirongwa senge Shotwell, gThumb, Gwenview, F-Spot,… iyo yaunogona kubata nayo mifananidzo yako uye nekugadzirisa iwo achigadzira masiraidhi, pakati pezvimwe zvakawanda zvingasarudzwa.
Torrent uye P2P kurodha pasi
Iko kune BitTorrent vhezheni yeGNU / Linux, asi ini ndinosarudza dzimwe nzira senge kufamba, Azureus, BitTornado, Ktorrent, nezvimwewo, iyo yekutanga ndiyo inosarudzika sarudzo yekutora torrent.
Zve P2P kurodha pasi iwe unogona kuenda xMule, chirongwa chakada kufanana neMule umo mausingazorovha nyurusi yakakurumbira yeWindows.
Kana iwe uri mumwe weavo vanosarudza eDonkey, unogona kutarisira pachirongwa chakafanana neichi chinonzi MLDonkey.
Agenda uye tsamba
MuLinux pane dzimwe nzira dzakakwirira zvakanyanya kupfuura Outlook, seThunderbird kana Kmail. Asi iyo yakakwana kwazvo uye inonakidza ndeye kushanduka. Neichi chishandiso iwe unozogona kubata yako tsamba uye uve neyako yakakwana chirongwa chekugona kugona kugadzirisa zviyeuchidzo, kumisikidza maalarm, nezvimwe.
Instant mameseji uye taurirana
Kana iwe uchida IRC uye uchitaura, iyo mIRC mutengi yeWindows ine zvinotsiva. Edza xChat, Kopete, ChatZilla kana Quassel IRC.
Microsoft Windows Live Mutumwa
Instant mameseji asiya Linux mazita senge Pidgin, aMSN, KMess, Mercury Messenger, Emesene, TorChat, nezvimwe. Pidgin ndeimwe yeakanakisa uye izvozvi plugins akagadzirwa kutsigira Teregiramu uye ayo anozivikanwa emojis. Ndinokurudzira izvi kwauri…
Iyo zvakare inowanikwa yeGNU / Linux, asi kana iwe uchida chimwe chinhu chechokwadi unogona kusarudza Google Video Chat kana zvakafanana.
Iyo yakashata Explorer ine dzimwe nzira dzeGNU / Linux senge Konqu Emperor kune avo vanoshandisa KDE desktop, Epiphany kubva kuGNOME, SeaMonkey, Netscape, Opera, nezvimwe.
Asi kana izvo zvaunoshandisa zvaive FirefoxUsatombo kunetseka, kune yepamutemo vhezheni yeGNU / Linux. Saka hapana chaucharasikirwa nacho.
Mabhurawuza eGoogle ane zvekare vhezheni yeGNU / Linux, seFirefox. Izvo zvakafanana kune izvo zveWindows.
Dhizaini uye Cad
Iwe unogona kuzviwanira iwe kune vane simba, vemberi uye vane hunyanzvi hwakanyanya Blender. Maya ndeimwe imwe nzira kune aya masutu ekushanda nema 3D dhizaini, kugadzira yakasarudzika mhedzisiro, magirafu, mitambo yemavhidhiyo, nezvimwe NaBlender, kunyangwe iri yemahara uye yemahara, yanga ichishandiswa mune akati wandei anozivikanwa mafirimu eHollywood (semuenzaniso: Spiderman), saka usazvidza simba rayo.
Magix Vhidhiyo Deluxe / VirtualDub
Kana iwe uchida kugadzira vhidhiyo mharidzo nemifananidzo yako, wedzera mimhanzi, yakakosha mhedzisiro, gadzirisa mavhidhiyo, cheka, ... unogona kuwana Hupenyu, OpenShot kana Avidemux. Navo uchawana mhinduro yehunyanzvi nemavhidhiyo ako.
Ini ndinosarudza LibreCAD, FreeCAD, QCAD kana DraftSight. Iyo yekupedzisira yakasimba uye inyanzvi imwe nzira, inowirirana neAccCAD gwaro rekuwedzera (saka kana uine mabasa akagadziridzwa muchirongwa che Autodesk, inogona kunge iri inonakidza kwazvo mukuenderana).
Kugadzira mapeji ewebhu unogona kushandisa zvirongwa senge Nvu, KompoZer, Quanta uye Aptana. Asi kana iwe usina ruzivo rwakawanda nekodhi uye ukasarudza iyo WYSIWYG-senge webhu mupepeti senge Dreamware, sarudzo yakanakisa ndeye Nvu.
Multimedia (vhidhiyo, odhiyo uye vashanduri)
Mahara Audio Converter
Mobile Media Shanduri, SoundConverter iwo graphical interface dzimwe nzira kune masimba maturusi ayo aripo zvakare econsole. Navo unogona kushandura fomati yeruzha kuita imwe.
FLV Vhidhiyo Shanduro / DVDvideosoft
Unogona kushandisa Avidemux kushandura pakati akasiyana mavhidhiyo mafomati.
Kana iwe uchida kubvarura zvemukati kubva kumaDVD sezvawakaita neiyi Windows chirongwa, unogona kuisa k9Copy kana iyo dvd :: kubvarura chishandiso.
Ichi chirongwa chakakurumbira, icho chakatangira Apple asi ikozvino pane vhezheni yeWindows. Kunyangwe paine chokwadi chekuti Linux iri * nix uye inogovera zvimwe zvakafanana kupfuura system yeMicrosoft, maApple anga asingade kugadzira vhezheni yepenguin system. Asi usazvidya moyo, Amarok zvinokubatsira kuti uzvikanganwe.
Semutambi kurira unogona kushandisa XMMS, Rhythmbox, Audacious, Exaile, Kaffeine, nezvimwe. Pane zvese zvandinokurudzira Rythmbox.
VLC, Totem, Beep Media Player, Xine, Mplayer, Kmplayer,… Vhezheni yeVLC yeLinux yakafanana neiyo yeWindows, asi Totem neMplayer inzira mbiri dzakanaka kwazvo.
Inogona kutsiviwa zvakakwana nechirongwa Miro.
Kana iwe uchida kunyora mimhanzi, iwe unenge uine chishandiso chakakura uine huwandu hwezviridzwa uye sarudzo pamwe Hydrogen.
Kurekodha CD / DVD / BD uye disc mifananidzo
Pamberi Nero Kupisa ROM / CloneCD
Chandinoda ndechekuti K3b, inoyeuchidza zvakanyanya chirongwa cheWindows, asi kana usingaifarire, unogona kurodha pasi dzimwe nzira dzakadai saNero Linux, Graveman kana Brasero inozivikanwa.
Kana iwe uchida kugadzira chaiwo Optical madhiraivha kurodha ISO mifananidzo pasina kupisa CD / DVD / BD, unogona kuzviita na AcetoneISO, Gmount-iso, Furius ISO Gomo uye GISOMount. Ese ari echokwadi uye ane simba kwazvo.
Faira kumanikidza / kudzvinyirira uye kupatsanura
WinRAR inowanikwawo kuLinux, asi ini handikurudzire nekuti haina mahara. Unogona kuisa PeaZIP, 7zip, Karchiver kana Xarchiver. Chandinoda ndechekuti PeaZIP, iyo inobvumidza iwe kumanikidza uye kupwanya huwandu hwakawanda hwekumanikidza mafomati uye kugadzira mafaira akanyorwa
MuLinux inonzi Sickle, asi chishandiso chine chinangwa chimwe chete, kupatsanura mafaera kuita zvidimbu zvidiki wojoina iwo.
Chengetedzo uye backup
IWindows firewall ine vamwe vayo muGNU / Linux uye vanodanwa AppArmor uye SELinux. Zvese zvakanaka, kunyanya yekutanga, asi kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chiri nyore uye yakapusa, unogona kushandisa Guarddog, Firestarter, Firewall Builder, KmyFIrewall uye Shorewall.
Antivirus (BitDefender, Eset NOD32, Kaspersky, ...)
Vazhinji vachakuudza kuti zvakapenga kuisa antivirus paGNU / Linux nekuti haina maturo uye chinhu choga chayinoita kudzikamisa hurongwa. Iwe unotoziva kuti GNU / Linux yakachengeteka zvakanyanya, yakasimba, uye dambudziko rehutachiona harinei nechekuita nemamiriro ezvinhu muWindows. Asi kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira, unogona kushandisa shanduro dzeKaspersky kana AVG Yemahara izvo zviripo zveLinux.
Acronis Yechokwadi Mufananidzo / Symantec Norton Ghost / Mberi Nero BackitUp / Paragon Backup & Kudzoreredza
kugadzira makopi ekuchengetedza, shandisa Siya Dup, dkopp, Kbackup kana imwe yeizvi. Iko kune zvakare vhezheni yeAcronis Yechokwadi Mufananidzo weLinux, asi ini ndinokurudzira yekutanga.
Autodesk AutoCAD Magetsi
Kana zvemagetsi chiri chinhu chako, kune akasiyana mamiriro eEDA eLinux ayo ane hunyanzvi uye epamberi. Imwe ndeye Geda Schemamatic, yakazara suite yekugadzira ako mapurojekiti.
TINA / ZVINODA / OrCAD / Garwe Technology
Garwe rakaburitsa vhezheni yeGNU / Linux, asi ini handikurudzire, zvinokonzeresa matambudziko. Kune mamwe mapurogiramu aunogona kushandisa KiCAD uye Magetsi.
Pane vhezheni yechirongwa ichi cheGNU / Linux. Iyo inonakidza software yekugadzira madhirowa edunhu, kunyanya anonakidza kune avo vanoshanda neArduino kana Parallax mabhodhi ekuvandudza.
Kana iwe uri wezvemuchadenga kana wezvemuchadenga, unogona kuisa Stellarium uye Celestia yeLinux. Mapurogiramu maviri akazara anounza iyo Nyika kune yako desktop uye ichakubatsira iwe mune yako teresikopu yekuona mabasa. Mapuraneti uye maKstarts iwe unogona kuve neicho chaicho planetaryum pane PC yako, kana iwo maviri apfuura mapurogiramu asingakugutse iwe, kunyange iwo ari iwo andinonyanya kufarira.
Zvishandiso uye zvinoshandiswa
Symantec Norton Chikamu Part Magic / Partition Wizard
Kugadzira zvikamu, wozvigadzirisa, chinja iyo faira sisitimu, saizi saizi, nezvimwe, unogona kushandisa imwe nzira yakanaka iriko uye inonzi GParted.
Jconverter / Super Unit Shanduri
Kana iwe uchikumikidza / uri mudzidzi wefizikisi, chemistry kana mainjiniya uye uri kugara uchishandura pakati pezvikamu, unogona kukwikwidza ShandukoAll kushandura ese marudzi emayuniti.
Kune vanoda RSS isa BvisaRSS.
Nemapurogiramu aya unogona kuziva zvakawanda nezve software, asi kunyanya Hardware yaunayo mukombuta yako (vagadziri, brand, modhi, inotsigirwa matekinoroji, tembiricha, fan fan, ...). Zvinonakidza kudzidza zvakawanda uye kutsvaga mamwe madhiraivha. MuLinux pane chirongwa cheichi chinonzi yakaoma info.
Mazhinji maturusi eGoogle, kusanganisira aya, ane vanoisa maGNU / Linux. Tarisa ivo pawebhusaiti yekurodha yakapihwa neGoogle.
Iyo inonakidza emulator kuisa mitambo yemavhidhiyo uye zvirongwa zveMS-DOS. Zvakanaka, nhau dzakanaka ndedzekuti pane vhezheni yeLinux. Kana iri MAME, iri emulator yemhando yepamusoro yemitambo yemavhidhiyo iyo zvakare yakagadzirira kushandisa paLinux. Kana iwe uchida kuziva mamwe emulators emitambo yemavhidhiyo, unogona kutarisa DeSmuME uye Yabause, pakati pevamwe.
Kugadzira screankast kana vhidhiyo screenshots, unogona kuisa RecordMyDesktop, Screankast, Xvidcap, Tibesti, Istanbul, RecordItNow, nezvimwewo, yekutanga kuve yeinonakidza kwazvo.
Zvekufungidzira chinhu chakanakisa muLinux ndeche VirtualBOX. Izvo zviri nyore uye zvakasiyana-siyana, kunyangwe iwe ungangoda kuyedza midziyo ine mukurumbira kana chishandiso cheXen ...
FireFTP, gFTP, kftpgrabber, ... kune dzakawanda dzimwe nzira dzevatengi veFTP, asi iyo filezilla ndiyo inonyanya kufadza uye zvakare iri yeLinux.
Zvirongwa zveIDE uye macomputer evagadziri uye vanogadzira mashandiro akawanda muLinux. ZveC, C ++, Java uye mimwe mitauro yaunogona kushandisa yakanakisa, GCC uye zvimwe zvishandiso zvekubatsira seGDB. Asi kana iwe uchida yakazara IDE nharaunda unogona kushandisa KDevelop, Eclipse, Anjuta kana Netbeans. Kugadzira graphical maficha, kune akakosha IDE nharaunda senge Glade, QT Musiki, QT4 Dhizaini, nezvimwe.
Arduino IDE / Arduino Block
Ivo anowanikwa zviri pamutemo kuGNU / Linux.
Lonquendo / Chinyorwa-kune-Kutaura uye nevamwe
Kuti uende kubva pane zvinyorwa kusvika pakutaura uye ubatsire vanhu vanoda zvishandiso zvekushandisa, muLinux une distro yakanyatsogadzirirwa vanhu ava. Inonzi Sonar. Asi mune chero kupi kugovera iwe unogona kuisa zvirongwa senge Orca, Onboard, eSpeak, KMouth, Jovie, ...
Tinotarisira yako inotsananguraKana chirongwa icho chaunoda imwe sarudzo chisingaonekwe mune runyorwa, inzwa wakasununguka kunyora chirevo kuti ugone kukubatsira iwe pachako pachezvako nenyaya yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Yakanakisa GNU / Linux dzimwe nzira kune Windows zvirongwa
Kunoshamisa kuunganidzwa kwezvimwe zvinotsiva. Ndatenda kwazvo, kwaive nezvirongwa zvandanga ndisati ndaziva. ZVAKAITIKA!
Chinyorwa chikuru !!, chaizvo currado, chakazara kwazvo !!, inkcape inoonekwa pachinzvimbo cheinkscape, ini ndasuwa Master pdf mupepeti, xnview, k3b, uyezve BRICSCAD isipo, yakanakisa autocad clone !!, asi ini ndinodzokorora, GURU NYAYA! !
Chekutanga ndatenda. Ini ndichafunga nezvekupinza kwako, asi k3b yakanyorwa.
Rondedzero yacho inenge yakwana uye yakanaka kwazvo.
Ini ndichiri kushaya chirongwa chekutsiva mavhidhiyo edhita, akadai seAdobe Premiere kana Sony Vegas.
Iko kune izvo zvinyorwa (Hupenyu, OpenShot uye Avidemux) ...
Chinyorwa chakanakisa Ndatenda zvikuru mubvunzo wangu ndewekugadzirisa odhiyo software pane chimwe chinhu chiri nani zvishoma pane kuchenjera
Mhoro. Unogona kutarisa dzimwe nzira dzakadai seLinux Multimedia Studio, Jokosher, Traveso DAW, Ardor, ... Sezvandambotaura muchinyorwa kune zvakawanda zvingasarudzwa uye zvakanaka kwazvo.
Kwaziso nekutenda !!!
Ndatenda zvikuru neruzivo, ndanga ndiri muLinux kwenguva pfupi uye ndanga ndarasika. Chinyorwa chikuru.
Kune vanhu vane hunyanzvi vanoshanda pawindwos ine Sony vegas vhidhiyo kana paapuro ine yekupedzisira cut pro, ndeupi akafanana vhidhiyo mupepeti waungakurudzira?
Ini handizive chaizvo kuti nei nharaunda yeLinux isingatsigire WPS Hofisi zvakakwana, iyo yandinofunga mune chinyorwa chema newbies seichi chinofanira kunge chakange chakaisirwa mukuwedzera kune inotyisa Libre Office uye bland Open Office. Kana iwe uchida hofisi yakashongedzwa, inonyatso kuenderana neMS Office uye yakafanana, shandisa WPS Hofisi iyo inenge iine shanduro yeSpanish uye iri shasha kunyangwe iri mune alpha kunyangwe mune linux. Mamwe ese haasi 100% anoenderana neMS Office.
Francisco Rojas akadaro
Zvinoshamisa sarudzo, ndatenda, Regards
Pindura Francisco Rojas
Tawanda (@tawanda) akadaro
Ini ndinobvumirana zvizere newe, Kingsoft (WPS Hofisi) ndeimwe yeayo mashoma anopa MS Office rutsigiro runogamuchirwa zvishoma pane Android, uye paLinux zvinogona kuita kuti unzwe uri kumba kana iwe wakashandisa Hofisi zvakanyanya. Semunhu anorema mushandisi weWindows neHofisi, ini handikwanise kunzwisisa kuti zvinofuratirwa sei nenyika yeLinux. Imhaka here yekuti iko kuteedzera kwakanyanya? asi chingave chinhu chakakura kwazvo kugutsa vamwe vasina chokwadi kuti vaedze Linux vasina kuparadza mafaera aanogamuchira nekutumira kune vechitatu mapato ..
Pindura kuna Axel Alen (@axelnxcp)
Zvekuteerera uye vhidhiyo kugadzirisa, ngatitaurei nezveCubase kana ProTools, MAGIX, Sony Vegas… ndedzipi sarudzo dziripo
Kuenzanisa Adobe Premiere kana Sony Vegas neLives, OpenShot uye Avidemux, zvakafanana nekuenzanisa bhasikoro nemavhiri ane Ferrari. Izvo hazvingo fanane uye hazvishande zvakafanana chinangwa. Zvichida Lumiera anogona rimwe zuva kuve imwe nzira.
Nezve rekodhi, ini handina kushandisa chero chinhu kunze kweGNU / Linux kwemakore mazhinji, asi kunyangwe mune zvimwe zvinoshandiswa hapana dzimwe nzira dzakakomba uye isina-mutsetse vhidhiyo yekugadzirisa imwe yacho. Linux iri pamusoro zvakanyanya paWindows, asi mamwe makambani makuru seAdobe uye Sony havadi kuburitsa Linux shanduro dzemapurogiramu avo, uye hapana dzimwe nzira dzinoshanda dzeLinux.
Iko kana iwe ukaona hukuru hwakanyanya hweLinux iri mukupa kwe3D, iwe unofanirwa kuyeuka kuti Autodesc isati yatenga, Maya yakanga isati yatombovapo yeWindows. Ndidzo dzakabatanidzwa shanduro dzeLinux dzinoshandiswa kune makuru mafirimu zvigadzirwa, seAvatar, nekuda kwekuita kwakanyanya uye kugadzikana kweLinux pasina kubhadhara marezinesi.
Pindura kune vasina chokwadi
Iwe une cinelerra uye lightworks, iwo maferraris. Chaizvoizvo cinelerra ndeye ferrari yakashandurwa se lada
Pachave nechirongwa chakafanana naEdraw? kugadzira zvigadzirwa nekukurumidza, kuyerera madhayagiramu, mockups, nezvimwe ...
Ernesto + akadaro
Ruzivo rwakakwana runodikanwa uye rwakaringana kune ichangoburwa yehukuru hweMicrosoft. Mushure mekutsvaga kwakawanda, ini ndawana inonakidza uye yakapusa ruzivo nezve GNU / linux. Ndiri kunzwa semwana ane rombo rakanaka netoyi yake nyowani paTatu Madzimambo Zuva.
Kuremekedza kwangu kwauri nebasa rako guru uye ndinokutendai zvikuru nekugovana nevezera rako.
Pindura kuna ernesto +
Mumwe munhu anogona kundiudza kana kopete inoenderana nemawindows 7 kana mamwe, maita basa kwazvo
Makorokoto pane ino yakakura runyorwa uye, sekutsanangura kwawakaita, zviri zvese zviripo software, zvese zve windows uye linux, izvo zvingave zviri kuisa pamwechete enisaikoropidhiya: D.
Ini ndinobvumirana nekutaura WPS kubva kukambani yemadzimambo. Inoenderana neshoko, kugona uye poindi yemagetsi Wese windows, linux uye Android (apa ndipo pandakatanga kuishandisa payakatanga kunzi kingoft office, zvaive sekushanda neMMS asi parunhare). Uku ndekwekuchengetedza kuenderana kweavo vanoshandisa MS sezvo mafomati ayo matatu eXml asiri 100% anoenderana neopendocument kana naivo.
LibreOffice ndiyo ine kusimudzira zvakanyanya, ndosaka ndichiifarira uye inoishandisa seye opendocument fomati.
Ini ndoda kuwedzera kune yako runyorwa.
Vokoscreen. Chirongwa chevhidhiyo kurekodha iyo desktop. Yakakosha yekugadzira vhidhiyo dzidziso
Shutter. Parizvino ndiyo iyo inondishandira zvakanyanya, ine mashandiro ayo ari mu hyper snap muma windows.
Inkscape (yatotaurwa, ndinofunga) yakanaka software ye vector gadzira dhizaini. Gimp yakanga isina kugadzirirwa izvozvo, vanozviratidza mubhuku, inkscape ndiyo yavanokurudzira.
Seizvo munyori weichi posvo akataura, iro runyorwa rwakareba uye rwakazara.
Chinyorwa ichi chakandishandira zvakanyanya, vanogona kugadzira vhezheni nyowani yeiyi kukwazisa kwe2016.
Muchikamu chehurongwa ndinosuwa Razaro, seyambuka-chikuva IDE inoenderana naDelphi yekukurumidza kunyorera kunyorera.
Kwaziso nekuremekedza basa rako, ini ndoda IDE kuronga muPHP, ndinoshandisa maNetbeans, asi handina kukwanisa kumisikidza nharaunda yako zvakanaka kuti ishande muPHP mushe.
Kune vanhu vari serious kwazvo pabasa ravo. Kutenda nemuenzaniso.
Pindura kuna bjam
Zvinenge zvese manyepo
Kuenzanisa Photoshop neGIMP kwakafanana nekuenzanisa Ferrari nengoro yebhiza
Linux yakanaka kunyora tsamba, kuverenga tsamba, kubhurawuza, kutarisa YouTube mavhidhiyo, kuteerera mimhanzi, uye nguva pfupi yapfuura kutamba mitambo yekare, asi zvimwe zvishoma.
Inzwi? Ehe, gore kana maviri apfuura kubva kuKXStudio unogona kuita chimwe chinhu, nemiganhu yayo
Asi hapana chimwe chinhu, Mufananidzo? Vhidhiyo? Pasina kutaura, murombo kwazvo, uye ini zvakare ndinovimbisa kuti iwe uchapedza maawa akawanda mugoogle pane kushanda, uye mune mamwe ma distros zvimwe zvinhu zvinoshanda, uye kune vamwe kwete, rwendo rurefu rwusingapere, nekuti iyo linux gurus mazuva ese Vanofunga kuti izvi hazvichabatsiri uye zvino tinozviita neimwe nzira, zvakare, sekureva kwavo, kuitira kuti tizoita kuti zvive nyore, kana tichigona kuzviita zvakaoma
Uye semuenzaniso, bhatani: edza kuona kana iwe uchigona kuwana chinyorwa chemavara senge windows notepad, uye iwe uchandiudza iwe kana iwe uchizviona iwe uchinyora mameseji mune terminal isingagadzike kuverenga, iine mraba sekeresa iyo inoita iyo zvinyorwa zvisingaverengeke ... edza, usanditende, edza
Uye ipapo iwe uchandiudza Unoziva sei? Zvakanaka, nekuti ndanga ndichishandisa Linux kwemakore gumi, uye ndingafarire kusiya Windows, asi hazvigoneke. Hapana munhu anondimanikidza, hongu, ndinonyora izvi nekuti chinogadzirisa chiropa changu ndechekuti vateveri veLinux zuva rese vanotaurira avo vasingazive kuti Linux iri nyore, uye zvirinani
Maitiro ekuvandudza kubva kunaDebian Wheezy kuenda kuna Debian Jessie (kuyedza)